Imbali yeBarbie Doll ne-Inventor uRuth Handler
Imbali yeeDolbie Dolls
URuth Handler waqulunqa iBarbie Doll ngo-1959.
Idoli likaBarbie laqulunqwa ngo-1959 nguRuth Handler, umqambisene noMatel, intombi yakhe eyayibizwa ngokuba nguBarbara. UBarbie waziswa kwihlabathi kwi-American Toy Fair eNew York City. Umsebenzi kaBarbie kwakufuneka usebenze njengedodoli yentsha. Umdumba waseKen wabizwa ngoonyana kaRute waza waqaliswa iminyaka emibini emva koBarbie ngo-1961.
Barbie Facts and Technology
Igama elipheleleyo ledoli yokuqala kwakunguBarbie Millicent Roberts, kwaye wayevela eWillows, eWisconsin.
Umsebenzi kaBarbie wawuyimodeli yentlobo yeselula. Ngoku ke, nangona kunjalo, idonsa yenziwe ngeenguqu ezixhunyaniswe kumsebenzi angaphezu kwama-125, kuquka uMongameli we-United States.
UBarbie weza njengekhrunette okanye i-blond, kwaye ngo-1961 iinwele ezibomvu zongezwa. Ngowe-1980, kwaqaliswa i-African American Barbie kunye ne-Hispanic Barbie. Nangona kunjalo, uBarbie wayenomhlobo omnyama ogama linguChristie owaqalwa ngo-1969.
UBarbie wokuqala wathengiswa nge $ 3. Izambatho ezongezelelweyo ezisekelwe kwindlela yokugqibela ye-runway ezivela eParis zathengiswa, zibiza ukusuka kwi-$ 1 ukuya kwi-5. Ngomnyaka wokuqala (1959), iidolli ezingama-300 000 zeBarbie zathengiswa . Namhlanje, isimo sempahla "# 1" (i-1959 yaseBarbie doll) sinokuthabatha i-$ 27,450. Kuza kube namhlanje, abaqulunqi befestile abangaphezu kwe-70 baye benza iimpahla ze-Mattel, basebenzisa ngaphezu kwee-yards ezili-105 zeetidi.
Kukho ukuphikisana nomfanekiso kaBarbie Doll xa kuqaphela ukuba ukuba uBarbie wayengumntu wokwenene umlinganiselo wakhe wawungenakwenzeka 36-18-38.
Imilinganiselo "yangempela" kaBarbie i-intshi ezi-5 (intshi), ama-3 ¼ intshi (inqeni), 5 intshi intshi (3). Ubunzima bakhe bu-7 ¼ ounces, kwaye ubude bayo buyi-intshi ezili-11,5.
Ngowe-1965, uBarbie waqala ukuba nemilenze ebophekayo, kunye namehlo avulwayo kwaye avaliwe. Ngowe-1967, i-Twist 'N Turn Turn Barbie yakhululwa yayinomzimba onokufuduka owawunqamlekweni okhalweni.
Ibhontshi yeBarbie eyayithengisa kakhulu yaya kuba yi-1992 ngokupheleleyo i-Hair Barbie, eneenwele ezivela phezulu kwentloko yakhe ezinzwaneni zakhe.
Ubomi beRuth Handler, i-Inventor kaBarbie
URuth no-Elliot Handler baqulunqa uMalel Creations ngo-1945 kunye neminyaka eyi-14 emva koko ngo-1959, uRuth Handler wadala idoli likaBarbie. URuth Handler ubhekisela kuye "njengomama kaBarbie."
Umphathi wabukela intombi yakhe uBarbara kunye nabahlobo bedlala needopi zamaphepha. Abantwana basebenzise ukuba badlale ukukholelwa, becinga imisebenzi njengabafundi beekholeji, abaxhasi kunye nabantu abadala abanomsebenzi. Umthengisi onqwenela ukwakha idoli eya kulungelelanisa indlela yokudlala ngayo amantombazana amancinci.
I-Handler kunye noMatel bazisa uBarbie, umzekelo wefestile osemtsha ekuthengiseni abathengi abathengi kwi-Toy Fair eNew York ngo-Matshi 9, 1959. Le doll entsha yayingenakufana nomntwana kunye needodo ezincinci ezazidume ngexesha. Lo kwakuyidonki enomzimba omdala.
Ngoko yintoni ephefumlelweyo? Ngethuba lohambo lwentsapho oluya eSwitzerland, umphathi waseGermany wenza i-Bild Lilli doll kwisitolo saseSwitzerland waza wathenga enye. I-Bild Lilli doll yayingumqokeleli ongeyinjongo yokuthengiswa kubantwana, nangona kunjalo, uMndilili wayesebenzisa njengesiseko sokuyila kwakhe uBarbie. Intombi yokuqala yeBarbie Doll, uKen Doll, yaqala iminyaka emibili emva koBarbie ngo-1961.
URuth Handler kwiBarbies
"UBarbie uhlala emela ukuba ibhinqa likhetha. Nangona kwiminyaka yakhe yokuqala, uBarbie akazange ahlale engumfana weKen okanye intombazana. Wayenempahla, umzekelo, ukuqalisa umsebenzi njengomongikazi, umphathi, umculi we-nightclub. Ndiyakholelwa ukuba ukhetho lukaBarbie lumele luncede i-doll catch ekuqaleni, kungekhona nje ngeentombi-ngubani oya kuba yinto yokuqala yokutshatyalaliswa kwabasetyhini kubaphathi nabaqeqeshi- kodwa kunye noomama. "
Ezinye izinto ezenziwa nguRute
Emva kokulwa nomhlaza wesifuba kunye nokuhlaselwa kwe-mastectomy ngowe-1970, uMenzi we-Handler uhlolisise imarike yesifuba esifanelekileyo se-prosthetic. Ukuphazamiseka kwizikhetho ezikhoyo, wabeka malunga nokuqulunqa isifuba esandelwayo esasifana nesimo sendalo. Ngomnyaka we-1975, uMenzi we-Handler wathola ilungelo lobunikazi elikuPhathelene nam, i-prosthesis eyenziwe ngobukhulu becala kunye nokuxininisa kumabele.
Ibali le Mattel
Omnye umzekelo womenzi wezinto zokudlala i-Mattel, inkampani yamazwe ngamazwe. Abavelisi bamagqabi bakhiqiza baze basasaze ininzi yamathoyizi ethu. Baphanda kwaye bahlakulele amathoyizi amasha kwaye bathenge okanye ilayisenisi yeetayitiyiti ezivela kubalimi.
UMatel waqala ngo-1945 njengengqungquthela yegaraji kaHarold Matson no-Elliot Handler. Igama labo lebhizinisi elithi "Mattel" lidibanisa iileta zamagama abo okugqibela kunye nokuqala, ngokulandelanayo. UMaton kungekudala wathengisa isabelo sakhe senkampani, kunye nabaphathi, uRuth no-Elliot, balawula ngokupheleleyo. Iimveliso zokuqala zikaMatel zazingumfanekiso wesithombe. Nangona kunjalo, u-Elliot waqala ukwenza ifenisha yeedodoli ukusuka kwiifreyimu zesikrini. Oku kuye kwaba yimpumelelo kangangokuthi uMatel washintsha ukuba angenzi lutho ngaphandle kweetayiti. UMatel wokuqala-mthengisi omkhulu wayeyi-"Uka-doodle," i-toy ukulele. Yayiyokuqala kumgca weemidlalo zomculo.
Ngowe-1948, i-Mattel Corporation yahlanganiswa ngokusemthethweni eCalifornia. Ngo-1955, uMatel watshintsha ukuthengiswa kwetheyibhile ngonaphakade ngokufumana amalungelo okuvelisa iimveliso ezidumile "Mickey Mouse Club". Ukukhuthazwa kokuthengiswa kwempahla kwamandla kwinto eyenziwa ngokuqhelekileyo kwiikhampani zokudlala.
Ngomnyaka we-1955, uMatel wakhulula ipempi yepokethi yokuphumelela yamatempile ebizwa ngokuba yi-burp gun.
Imbali ye-Ice Cream
Imbali yee-American Roads kunye ne-First Federal Highway
Intshayelelo kwiGreen Technology
Imbali yezithombe: i-Pinholes ne-Polaroids kwi-Digital Images
Ubunokwenzeka beNyunyana yeziTsha ezintathu okanye ezininzi
Admington University Admissions
Ngaba Utywala Buya Kubi?
Indlela yokulungisa iintloko kwi-Brush Paint Brush
Indlela yokuqeqesha i-Century Ride
4 Izitayela zaseJapan zoBugcisa
Iimenyu zokuQinisekisa zoPhuhliso lweZenzo zokuziphatha
Isikhokelo sokugqoka i-Gear Snowboarding Gear
Imbali yeMission Pathfinder Mission
Ukuduma Nokukhanyisa - Oko Ukwenza Xa Uphelelwe Ngaphandle
Isikhokelo kwi-Ins kunye neMigqaliselo yeMimiselo yokuBathunywa kwabemi baseCuban
U-UFrentshi ubizwa ngokuba ngu-U
Ukusebenzisa i-smartphone kwiCandelo
I-Hierakonpolis (IYiputa) - Uluntu olubanzi kakhulu lwe-Predynastic eYiputa
Injongo yoBumbiswano ekuHlanganisweni
I-Christian Bale Ithetha Ngayo "UBatman Uqala"